chewing betel nuts – Healthy Life Journal
All posts tagged "chewing betel nuts"
ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ် ကွမ်းစားရင် ဘာဖြစ်တတ်ပါသလဲ…
—၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်မှာ ကွမ်းစားလို့ ရပါသလား။ ကွမ်းစားမိရင် ကလေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသလားရှင့်။ MMA(FB) A. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကွမ်းစားရင် မွေးလာတဲ့ကလေးလေးဟာ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မေး။ ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာကွမ်းစားရင် မွေးလာတဲ့ ကလေးအပေါ် ထိခိုက်မှု ဖြစ်နိုင်ပါသလားရှင့်။ ဖြေ။ ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကွမ်းစားရင် မွေးလာတဲ့ ကလေးလေးဟာ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကွမ်းစားတာက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အရက်သောက်သလိုမျိုး...
နှစ် ၃၀ နီးပါး စွဲလမ်းစွာ စားသုံးခဲ့တဲ့ ဆေးလိပ်နဲ့ကွမ်း ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာ ၁၄ နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဦးမောင်မောင်လတ်ရဲ့ အတွေ့အကြုံ
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကော်ပိုရေးရှင်း၏ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးမောင်မောင်လတ်က နှစ် ၃၀ကြာ အလွန်အမင်း စားသုံးခဲ့သော ကွမ်းနှင့် ဆေးလိပ်ကို ၂၀၀၂ ခုနစ်ကတည်းက ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည့် သူ့အတွေ့အကြုံကို ပြန်လည်မျှဝေပြောပြခဲ့သည်။ “ကျွန်တော် ၁၀ တန်းအောင်ခါစ ၁၉၇၄...